Otu esi etinye Tor Browser na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
October 30, 2021 August 14, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Tor Browser na DNF Tor RPM (A kwadoro)
Budata ebe nchekwa ihe nchọgharị Tor
Wụnye Tor Browser
Otu esi ahazi Tor Browser
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ihe nchọgharị Tor kacha ọhụrụ na Rocky Linux 8.
Nke mbụ, wụnye ndabere EPEL ebe nchekwa.
Na-esote, mepụta faịlụ nchekwa maka Tor site na iji ndezi ederede ọ bụla.
Ugbu a tinye ihe ndị a n'ime faịlụ ahụ.
ụdị "Y," wee pịa “Banye bọtịnụ” ịga n'ihu na nwụnye.
Cheta na a ga-akpali gị ibubata igodo GPG n'oge nrụnye ugboro abụọ. Ụdị "Y" mgbe ngwa ngwa pụtara.
Kwado nrụnye site na ịlele ụdị ihe nrụpụta Tor.
Nhọrọ nke abụọ nke nrụnye bụ ịwụnye Tor Browser site na iji ebe nchekwa kachasị ọhụrụ sitere na ibe nbudata. N'oge nkuzi a, ụdị 10.5.4 bụ nke kachasị ọhụrụ; Otú ọ dị, n'ọdịnihu, nke a ga-agbanwe, jide n'aka na ị ga-enweta ụdị emelitere.
Site na ndabara, Rocky Linux 8 kwesịrị itinye nke a. Ọ bụrụ na-efu, jiri iwu a:
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji wget iwu ka ibudata ọhụrụ .mgb njikọ dị ka ndị a:
Ọtụtụ ndị ọrụ ga-eji jikọọ site na ndabara; Agbanyeghị, ntọala Tor Network nwere ike iji ntọala proxy maka mba ndị dị ka China, Egypt na Turkey, ịkpọ aha ole na ole ebe amachibidoro iji ọrụ dị otú ahụ. Biko hụ na ị naghị emebi iwu ọ bụla site na iji nke a. Ịgafe n'ụfọdụ mba ndị a nwere ike itinye gị na nsogbu siri ike.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi ebudata Tor Browser site na isi mmalite, wụnye ma tinye akara ngosi na menu ngwa gị. Tor Browser bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ chọrọ idebe ihe omume ịntanetị ha n'aka ndị mgbasa ozi, ISPs na weebụsaịtị. Uru ọzọ nke iji Tor Browser bụ na ọ nwere ike inye aka n'ọtụtụ ọnọdụ ịnweta mgbochi mmachi na obodo ha, ndị mmadụ na-achọ izochi adreesị IP ha, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-achọghị ka e jikọtara ha na omume nchọgharị ha.
Categories Nkume linux Tags Nkume linux, Ihe nchọgharị TOR Mail igodo
August 15, 2021 9: 39 am
Daalụ maka ntuziaka.